Imigaqo yeNkonzo -iTai ekushicileleni nasekupakisheni Co., Ltd.
Nceda ufunde le migaqo nale miqathango ngononophelo. Ziqulathe ulwazi olubalulekileyo ngokubhekisele kumalungelo omthetho wabathengi ("uMthengi"), iziqinisekiso, uxanduva kunye nezisombululo ezikhoyo zeempendulo.
I-Tai ekupakisheni ngokudibeneyo isekwe yi-Shanghai Anxin Packaging, i-Henan Lufeng Packaging, i-Zhejiang Xinya Packaging, i-Jiangsu Shanyi Packaging kunye ne-Zhejiang Dazuo Packaging. Ukusukela ukuba inkampani nganye yemveliso ivelise uthotho lweemveliso, inkampani esekwe ngcono inokuba neemveliso ezibanzi ezinokulungelelanisa kunye nokusebenzela abathengi abatsha nabadala. Iminyaka engama-30 yamava okuvelisa kwicandelo lokupakisha iphepha, ukuzibophelela ekunikezeni isiphelo esiphezulu, uyilo olutsha lweebhokisi zokupakisha.
Ukuba unemibuzo malunga neWebhusayithi okanye iMigaqo yokuSebenzisa, nceda unxibelelane: service@taiinpackaging.com.
Ngokungena nokunxibelelana neWebhusayithi nakwesiphi na isixhobo kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho; ukubrawuza ikhathalogu ngeWebhusayithi, ukufunda amanye amacandelo eWebhusayithi okanye unxibelelane ngeWebhusayithi, Uyavuma ukwamkela kwaye uthobele le Migaqo yokuSebenzisa kunye noMgaqo-nkqubo wabucala nawo onolwazi malunga neeKuki kunye nokusetyenziswa kwazo. Ukuba awuvumelani ngokupheleleyo okanye ngokuyinxalenye nale Migaqo yeNkonzo okanye uMgaqo-nkqubo wabucala, kuya kufuneka uyishiye iwebhusayithi kwaye uyeke ukusebenzisa iinkonzo zayo kwangoko. I-Tai ekupakishweni inokutshintsha amaxesha ngamaxesha okanye ihlaziye yonke okanye inxenye yale Migaqo yeNkonzo okanye uMgaqo-nkqubo wabucala. I-Tai ekupakishweni iyakucebisa ukuba ufunde iMigqaliselo yeNkonzo rhoqo kwaye uprinte ikopi yale Migaqo yokuSebenzisa ukuze ubhekise kuyo kwixesha elizayo.
Ukufikelela kwiWebhusayithi simahla. Ukufikelela kwiWebhusayithi kuvumelekile ngesiseko sokuba iTai ekupakishweni inokuthi, ngokokubona kwayo kwaye ngaphandle kwesaziso, iguqule / irhoxise / iphazamise / imise nayiphi na indawo yeWebhusayithi okanye iyonke. I-Tai ekupakisheni ayinalo uxanduva kuwe okanye kulo naliphi na iqela lesithathu, ukuba nayiphi na indawo okanye yonke iwebhusayithi ayifikeleleki, ayifikeleleki okanye ayifumaneki ngaso nasiphi na isizathu.
Ulwazi olunikezwe kwiWebhusayithi, kwaye ngaphakathi kwiKhathalogu, lolwazi ngokubanzi kwaye alwenzi okanye wakhe isivumelwano sentengiso okanye sokuthenga okanye unike naluphi na uhlobo. Iinkcukacha ezongezelelweyo zinokucelwa ngephepha elithi 'QHAGAMSHELANA NATHI' kwiWebhusayithi.
Kuya kufuneka uvume:
• ukungazami ukoyisa naluphi na ukhuseleko okanye ukhuseleko kwiWebhusayithi;
• ukungavelisi kwakhona, ukuphinda, ukukopa okanye ukuthengisa kwakhona nayiphi na indawo yeWebhusayithi;
• ukungangeni ngaphandle kwegunya, ukuphazamisa, ukonakalisa okanye ukuphazamisa:
-liphi na icandelo leWebhusayithi;
-so nasiphi na isixhobo okanye inethiwekhi egcinwe kwiWebhusayithi;
-Nayo nayiphi na isoftware esetyenzisiweyo kulungiselelo lweWebhusayithi; okanye
Nasiphi na isixhobo okanye uthungelwano okanye isoftware eyeyayo okanye esetyenziswe ngumntu wesithathu.
Ngaphandle komda, zonke iifoto, iinkcazo, iividiyo kunye nemizobo kunye nayo yonke imixholo equlethwe kwiWebhusayithi nakwiKhathalogu yepropathi yeQela leHCP. Uvumelekile ukuba undwendwele iWebhusayithi, uprinte kwaye ukope imifanekiso, kwaye uthumele imifanekiso ekhoyo kwiWebhusayithi ukuze uyisebenzise ngokusemthethweni ingeyiyo eyokuthengisa okanye yokuthengisa kwakhona. Awuvumelekanga ukuba ukope ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye kwiWebhusayithi nakwikhathalogu ngaphandle kwemvume ecacileyo yeTai ekupakisheni.
I-Tai ekupakisheni ayinaxanduva lomonakalo okanye ukuphazamiseka okubangelwa naziphi na iimpazamo, intsholongwane, ukushiya, iifayile ezikhohlakeleyo, imiba yoqhakamshelwano, ukusilela kwezixhobo, okanye ukucinywa komxholo.
I-Tai ekupakisheni ithengisa ukuthengisa kwayo ngokupheleleyo kubathengi beShishini, ngelixa ikwanceda abantu. Ngokubanzi i-odolo encinci iziqwenga ezingama-2000-5000 kuyilo ngalunye.
Singanikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuprinta: ukuprintwa kwesikrini, ukunyathela okushushu, ukushicilela nge-offset,
ilebheli kunye nokunye.
Ixesha lethu lemveliso lihlala likho kwiintsuku ezingama-20-25 emva kokuqinisekiswa kwesampulu yangaphambi kwemveliso. Ukuba isicelo sakho sokurhoxisa sibonwe ngaphambi kokuba siqhubekise iodolo yakho, siyavuya ukurhoxisa iodolo yakho yokubuyiselwa imali ngokupheleleyo, kodwa nje ukuba iodolo iqhubekile, asisayi kuphinda siyirhoxise.
Ukubuya kunye noTshintshiselwano
Yonke iodolo yeevenkile iyinto yokugqibela kwaye ayinakubuyiselwa okanye itshintshiswe.
Izinto ezonakalisiweyo / iimpazamo ze-odolo
Nangona imveliso nganye ihlolwe ukuqinisekiswa komgangatho ngaphambi kokuhambisa, kunokwenzeka ukuba ufumane into eyonakalisiweyo. Ukongeza, ngenxa yempazamo yomntu, iimpazamo zoku-odola zinokwenzeka. Ngezi zizathu, kubalulekile ukuba uvule kwaye uhlolisise izinto zakho nje ukuba uzifumane.
Nceda usazise kwisithuba seentsuku ezi-5 zokufumana iphakheji ukuba kukho into engalunganga kwi-odolo yakho. Asinakho ukuzukisa utshintsho ngaphandle kwamaxesha abekiweyo, njengoko kuchaziwe kwimigaqo-nkqubo yethu.
I-Tai ekupakisheni ayinaxanduva lwayo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo owenzeka ngenxa yokulibaziseka okanye ukungakwazi ukuhambisa okubangelwe zizenzo zikaThixo; imozulu enzima; imfazwe; intlekele eqhelekileyo; imililo; uqhankqalazo; ukuphazamiseka emsebenzini; ukulibaziseka ekuhambiseni izinto okanye iimpahla ngabaxhasi; Ukunyanzeliswa kukarhulumente, imigaqo, umda wamaxabiso okanye ulawulo; ingozi; ukulibaziseka kwezinto eziqhelekileyo; ukulibaziseka ekuvunyweni kwamasiko; okanye nakweyiphi na enye into engenakuthintelwa okanye ngaphaya kweTai kulawulo olusengqiqweni lokupakisha. Nawuphi na umhla wokuhanjiswa unokwandiswa, kwa-Tai ekukhetheni ukhetho, ukuya kuthi ga nakuphi na ukulibaziseka okubangelwe ngumnyhadala wokunyanzelwa.
Imibuzo malunga neeMveliso zethu okanye uPricelist
Nceda unxibelelane nathi
Indlela yesikhululo sikaloliwe i-299, iSithili saseJiading, eShanghai
Iibhokisi zezipho zezipho, Isipho sokuKhuthaza, Ingxowa yokukhuthaza, Ibhokisi yeZipho, Yenyuka ibhokisi Carton, Ibhokisi yeZipho zeLamin,